Bhitaranika 01 Night / 02 Days - Luxury Tours India- Tour Operator Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Musha - Ona kuona
Bhitarkanika 01 Night / 02 Mazuva mazhinji
Mutengo Nemunhu bhajeti
Zuva 01: Kusvika Khola - Jungle Resorts
Kusvika paSande Pebbles Jungle Resorts. Mushure mekutarisa-kupinda kunzvimbo yedu yekushanyira, shanyira Project Area & Museum. Mamwe manheru anofarira moto wemisasa nemafuta edu emufaro ekudya uye Kudya. Usiku huno paSande Pebbles Jungle Resorts.
Zuva 02: Jungle Resorts - Kubva
Mushure mekudya kwakanaka kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaSvondo kunoshanyira Bird Sanctuary, kuenda kuHunting Tower yeAkare King uye kuenda kunezvikepe zvakasiyana-siyana pamharaunda yemugwagwa inogamuchirwa neDhipatimendi reWallife, kuti ione nguruve. Mushure mokufamba kwemasikati kwekufamba rwendo.
National Park Entry Time : 07: 00AM - 02: 00PM
National Park Out Time : 05: 00PM
kupinda : Kupindira kwemvumo yepaki yepaguru ndeyokungonzwisisika kweDhipatimendi reMasango.
Zvokudya muIndaneti yedu : Veg Pakoda
Kusvika kuIndaneti yedu :
Nearest Railway Station : (Bhadrak -80kms to Jayanagar Jetty) (Cuttack - 140Kms to Khola Gate)
nhandare yendege : Bhubaneswar-160kms ku Khola Gate.
Iva wokutanga kuongorora "Bhitarkanika 01 Night / 02 Days" kukanzura mhinduro